भारतीय दादागिरीबिरुद्ध गृह मन्त्री बादलले दिए यस्तो कडा अभिव्यक्ति — Sanchar Kendra
१कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन २०३ जनाको मृत्यु
२ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै
३पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार ५२० जनामा संक्रमण पुष्टि
४ओलीसँग चपलीहाइटमा भएको थियो यस्तो गोप्य सहमति, माधव नेपाल आफैले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
५सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?
६मकवानपुरमा थप १ सय ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पर्सामा पनि बढ्दै
७सपथ लिँदालिँदै जब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्रपतिसामु चिप्लियो यस्तो शब्द, त्यसपछि जे भयो…
८रुपन्देहीमा थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा संकट झन् बढ्दै
९विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
१०ओलीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, के बिषयमा भयो कुराकानी ?
११तिब्र गतिमा फैलिदै कोरोना, बाँकेमा दुई घण्टामा ५ संक्रमितको मृत्यु
१२प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, काे-काे बने नयाँ मन्त्री ? नामलिस्टसहित
भारतीय दादागिरीबिरुद्ध गृह मन्त्री बादलले दिए यस्तो कडा अभिव्यक्ति
काठमाडौं । बेला-बेलामा नेपालसँग निहु खोजिरहने भारतबिरुद्ध गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । गृहमन्त्री बादलले भारतीय हस्तक्षेपका कारण तराईका क्षेत्र डुवानमा परेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले भारतले सीमा क्षेत्रमा सडकरुपी बाँध बनाउँदा नेपाली भूमि डुवानमा परेको भन्दै यस्तो गतिविधि हस्तक्षेप नै भएको बताए ।
‘राजनीतिक रुपमा भन्दा यो भारतले नेपालमा गरेको हस्तक्षेप नै हो’ उनले भने, ‘उनीहरुले आफ्नो हित हेरे, तर नेपालको हितलाई ध्यान दिएनन् ।’ भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँध र संरचना हटाउन पहल गरे पनि सार्थक नभएको मन्त्री थापाले बताए । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदा यससम्बन्धी सम्झौताहरु भएका थिए । सम्झौताको सही ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन’ उनले भने ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सीमामा भारतद्वारा निर्मित सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले यस्तै निर्देशन यसअघि पनि दुई पटक दिइसकेको छ ।
गत वर्ष, गत जेठ १६ गते र सोमबार समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनको भाषा उस्तै छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको रहेका वस्ती, सडक, बाँध र तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’ सोमबार बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति शशी श्रेष्ठले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ । एकीकृत वस्ती निर्माणको विषयमा लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना सम्बद्ध निकाय वा सरकारबाट नआएको भन्दै समितिले स्पष्ट गुरुयोजना ल्याउन भनेको छ ।
समितिले जथाभावी डोजर चलाउनुभन्दा माटोको भूबनोटको निरीक्षण गरी जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी योजना बनाएर विकास निर्माणका काम गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तहका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरुले डोजर किनेर अनियमितता गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित वा प्रभावितलाई दिइने क्षतिपूर्ति वा राहत रकम वृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘क्षतिपूर्तिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी गम्भीरताका आधारमा राहत रकममा वृद्धि गर्ने’ निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘पीडितलाई विभिन्न तहको समन्वयद्वारा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत उपलब्ध गराउन’ पनि निर्देश गरिएको छ ।
राहत कोष र राहत तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थासहितको संयन्त्र प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, राजमार्ग जोड्ने सडक, रेल मार्गमा निश्चित दुरीमा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन र सडक किनारमा नालाहरु अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।